Kenya oo cagta loo saaray wadadii ay ciidamadeeda uga saari lahayd dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya oo cagta loo saaray wadadii ay ciidamadeeda uga saari lahayd dalka
Midowga Yurub ayaa joojiyay inta badan lacagtii uu siin jiray ciidamada Kenya ee ka howlgala Soomaaliya kuwaas oo muddo Sagaal sano ah qaab calooshood u shaqeystnimo ah u joogay dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Lacagtii ay deeq bixiyeyaashu siinayeen Ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya, kuwaas oo ka tirsan Howlgalka Midowga Africa ee AMISOM, ayaa laga jaray qiyaastii in ka badan %60, oo u dhiganta ku dhawaad 45 Malyan oo lacagta Doolarka Mareykanka ah.
Tallaabada lagu jarayo mushaaraadka ayaa dhaqan geleysa sannad maaliyadeedka cusub ee bilaaban doona bisha Julay ee foodda nagu soo heysa, maaddaama ay soo dhowaatay xilligii loo qorsheeyay in ay ka baxaan dalka.
Xubnaha Midowga Afrika ayaa isku raacay in ilaa 31-ka December 2021, la gaarsiiyo joogitaanka Ciidanka AMISOM, ka hor inta uusan Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay siyaadin waqtiga.
Kenya ayaa ciidamadeeda soo galisay Soomaaliya dabayaaqadii 2011-kii, markaas oo ay si cad u jabisay go’aan uu soo saaray Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay bishii December 6, 2006, kaas oo tirsigiisu ahaa 1725, qodobka 4aad oo lagu sheegay in Dowladaha xuduudda la leh Soomaaliya ciidamo ka socda aan la geyn karin dalka.
In ka badan 22,000 oo askar oo ka socda Africa, ayaa ku sugan Soomaaliya, kuwaas oo dagaal kula jiray Kooxda Al-Shabaab, mid kasta oo ka mid ah askartaas ayaana mushaar ahaan u qaata in ka badan $1000, waana in ka badan toban jibaar mushaaraadka ay qaataan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya.
Saraakiisha Kenya oo garab ka helaya qaar ka mid ah Madaxweynayaasha dalalka ciidamadu ka joogaan Soomaaliya, ayaa ku doodaya in wali joogitaankooda dalka uu muhiim yahay.
Madaxweynaha Burundi Evariste Ndayishimiye, oo tixraacayay qorshayaasha lagu dhimayo ciidamada Africa ka jooga Soomaaliya si loogu diyaar garoobo in si buuxda ajaanibta looga saaro dalka, ayaa ka digay joojinta Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM).
Qorshuhu wuxuu ahaa Dowladda Soomaaliya oo ka faa’iideysaneysa ciidamada uu u tababarayo dalka Turkiga ay horraanba amniga dalka kala wareegaan AMISIOM, waxaase riyadaas beeniyay Maxamed Cabdullahi Farmaajo, oo afartii sano ee uu joogay kala qeybiyay askarta, una adeegsaday dan gaar ah.
AMISOM waxay soo gashay Soomaaliya 2007, Si ay Dowladda Soomaaliya kaga taageerto la dagaallanka Al Shabaab iyo kooxaha kale ee xag jirka ah. Wadamada ay ka socdaan ciidamada AMISOM waxaa ka mid ah Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda.
Ciidamada AMISOM ayaa loo qorsheeyay in ay baxaan December 2021 kadib markii Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay (UNSC) ay kordhiyeen mudadii hore loo qabtay oo ahayd 28-ka Febraayo.
Xiriirka Diblumaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa soo hagaagayay maalmahaan, kadib markii xaalkii halkii ugu liitay gaaray siddeedii bilood ee la soo dhaafay.